Induction Efaka I-Steel Strip ne-RF Induction Forging Heater
Ikhaya / Izicelo / Ukukhishwa kwe-Induction / Induction UKWAKHA Steel Strip
Isigaba: Ukukhishwa kwe-Induction Tags: ukwakha umucu wensimbi, ukwenziwa kwe-strip yensimbi, inqubo yokuqamba insimbi, ukukhishwa kwe-induction, ukufakwa kwe-induction yokwakha umshini wensimbi, indwangu yensimbi, ukwakhiwa kwensimbi
Induction Efaka I-Steel Strip ne-Induction Heating System
Inhloso Ukushisa umucu wensimbi engu-1025 kuya ku-1800 ºF ngaphambi kwenqubo yokwakha ukukhiqizwa kwezicathulo zamahhashi. Njengamanje, izikhala ziyasikwa futhi zifudunyezwe kuhhavini ophehlwa ugesi bese zifakwa emaphephandabeni. Njengoba ikhoyili yokungeniswa isendaweni, insimbi ibizofunzwa ngokuqhubekayo kusuka kuroli ngokusebenzisa ikhoyili yokungeniswa iye emaphephandabeni okwakha. Ukuze kuhlangatshezwane nezinga lokukhiqiza elikhuphukile, ukushisa kwesigaba sensimbi esingu-13 must kufanele kwenzeke ngaphakathi kwemizuzwana eyi-10.
Impahla engu-1025 yensimbi engu-3/4 ″ ububanzi no-1/4 ″ obukhulu.
Ukushisa kwe-1800 ºF
Izinsiza kusebenza DW-HF-60kW okukhipha isimo esiqinile sokungeniswa kwamandla kufaka phakathi isiteshi sokushisa esinamandla aphelele we-0.5 μF.
Inqubo I-Ameritherm 40 kW yokukhishwa kwamandla okufakwa kwesimo esiqinile kutholakale ukuthi izuze kahle le miphumela elandelayo: Imiphumela • I-1800 ºF ifinyelelwe ngemizuzwana eyi-10.
• Izinga lokukhiqizwa kwengxenye eyodwa njalo kumasekhondi ayisi-1 kuya ku-5 lihlangatsheziwe.
• Le miphumela engenhla ifinyelelwe ngokusebenzisa i-39 coil style style coil elinganisa u-1 1/2 ″ ID no-11 1/2 ″ OAL.
Induction Ukufaka Billets
Induction Ukwakhiwa Okushisayo Okukhipha Insimbi Engagqwali Yensimbi